29 UYILO OLUCOKISEKILEYO LWEKHITSHI YOYILO - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi 29 Uyilo oluCokisekileyo lweKhitshi yoyilo
29 Uyilo oluCokisekileyo lweKhitshi yoyilo
Le galari iphonononga umhlaba woyilo lwekhitshi. Amakhitshi amancinci kunokuba ngumceli mngeni wokulinganisa isitayile kunye nemfuneko kwaye ufumane yonke into oyifunayo kwindawo exineneyo. Nazi izinto ezinesitayile kunye nexesha langoku zoyilo lwekhitshi ukufumana izimvo zakho zihamba.
Ikhitshi eboniswe ngasentla ngokufanelekileyo isebenzisa indawo encinci enayo, ukwandisa ukugcinwa ngaphandle kokubingelela indawo yokusebenza. Inokhetho olunomdla lokugqiba. Isebenzisa umama weeperile zethayile yomqolo ongasemva kwaye, ngethamsanqa, umphezulu wekhawuntari yesiqithi sasekhitshini. Ukuphela kwekhitshi, iya kwisitayile esinexesha langoku - iingcango ezimnyama ezingcango kunye nesidumbu esineentsimbi zentsimbi zanamhlanje.
Iingcamango zeKhitshi eziCwangcisiweyo
Iikhabhathi zekhitshi zewalnut eziqinileyo ezinomtsalane zazisetyenziselwa le khitshi lincinci, kodwa yanikwa ukujija kwanamhlanje ngokusebenzisa ukhetho lwangoku lwezinto ezibonakalayo kwikhawuntala ephezulu kunye nomqolo ongasemva, ukongeza kwiindonga zeorenji ezinesibindi. Igrayite engwevu eneprofayile ecacileyo yayisetyenziselwa umphezulu wekhawuntara, ngelixa umva wokutshiza usebenzisa iithayile zemibala yegrey engwevu nomhlophe. Ngaphandle kobukhulu obuncinci, eli khitshi ligcina ilizwe lendabuko lihamba kunye neendonga zalo ezimnyama zeorenji kunye nekhabhathi yekhitshi. Inokugqitywa kokugqitywa kwesilingi kunye nezixhobo eziboniswe ngaphezulu kweekhabhathi ezingaphezulu ukugqibezela ukujonga.
Ngokunikwa indawo encinci, le khitshi inika ubeko olwahlukileyo. Iikhabhathi kwindalo yemithi ye-beech yendalo yayifakwe kwindonga engwevu iyenza ime ngaphandle kwimvelaphi emnyama, ngelixa isiqithi sekhitshi esinesiseko esimnyama se-walnut kunye nomgangatho omhlophe oqinileyo omiswe ngaphezulu wabekwa ngokwahlukeneyo endaweni yokufana nekhabhathi ephambili yekhitshi.
Iimodyuli zeemodyuli lukhetho oluthandwayo nolusebenzayo ngakumbi xa unendawo encinci. Eli khitshi lisebenzisa iikhabhathi zemodyuli zoyilo lwesiko / iiprofayili kwi-mocha brown ekugqibeleni yokujonga ngakumbi. Oku kubhangqiwe ngeethayile ezimdaka ngombala kunye netyuwa kunye nepepile lenyengane. Ngaphandle kobukhulu obuncinci, iyakwazi ukulingana kwisiqithi esincinci sekhitshi kunye nekhabhathi yeemodyuli ezisisiseko se-walnut.
Ukuya kwi-vibe yesiko, eli khitshi liyakwazi ukulingana kwi-oveni yamatye ngokubeka i-niche ejikelezwe ngamatye abunjiweyo. Ukwakhiwa kwelitye lekalika kujongeka kukhulu ngokuchasene neendonga ezityheli zekalika kwaye kukwahambelana negranite esetyenzisiweyo kwiikhawuntari. Iikhabhathi zasekhitshini zimodareyitha kunye neeprofayili zesitayile sendabuko kunye nezixhobo.
Iikhikhini zemveli zihlala zikhangeleka zinzima kwaye zichitha indawo, kodwa ngocwangciso olululo, unokwenza isitayile sendabuko sisebenze nakwindawo ezincinci ezinje ngalo mzekelo. Kusetyenziswe imigangatho yamatye endalo ngombala okhanyayo okhanyayo ongathathi cala, nakwiikhabhathi zasekhitshini, yindibaniselwano yamantongomane amnyama kwiikhabhathi eziphambili kunye wengue kwisiqithi sasekhitshini. Ubuso befriji bugutyungelwe ngohlobo olufanayo neengcango zekhabinethi zokuyifihla kunye nokwenza umphezulu ofanayo. Uyilo lukwazile ukucofa kuluhlu lwe-hood egqunywe ngamatye e-faux kunye nesiqithi sekhitshi esine-bar counter.
Imibala ekhanyayo yayisetyenziswa kweli khitshi ukuyenza ibonakale ibanzi kwaye ikhanya. Iqukethe indibaniselwano yeekhabhathi ezingwevu ezingwevu kunye nekhabhathi yesiseko yeeblue iikhabhathi ezinesiteki setye esikhethekileyo. Ukudityaniswa kwemibala kujongeka kutsha kwaye okwangoku, kunika indawo imigca ecocekileyo kunye nemiphetho ecekeceke efana noyilo lwala maxesha.
Izipho zonyaka wesithathu kuye
Le khitshi idibanisa i-aesthetics yanamhlanje kunye nokugqitywa okuphefumlelweyo kwe-rustic. Iikhabhathi zodwa zigqibile oki kwaye zisebenzisa indawo emhlophe eqinileyo emhlophe yokucoca indawo efanayo. Ukutshiza ngasemva, iithayile zemigca emarmore emhlophe zazisetyenziselwa ukongeza ubume kunye nephethini kwisithuba.
Esi sithuba sasekhitshini esixineneyo sibonisa iindonga ezi-2 ezisetyenziswe ngokupheleleyo kwiikhabhathi zasekhitshini, ngokufanelekileyo kusetyenziswa indawo ekhoyo encinci. Iindonga zinomthunzi ococekileyo wombala ohlaza ocacileyo, onika imvelaphi epholileyo ekwanceda ukugqiba iikhabhathi zaseMahogany.
Indawo yetshintsho yanamhlanje ekhitshini esebenzisa indibaniselwano yegrey ukwenza indawo yokuphumla ekhitshini. Iindonga zapeyintwa ngombala ofudumeleyo ompunga ojongeka ugqibeleleyo kunye nekhabhathi zekhitshi ezingwevu. Ukugqibezela uvakalelo lwangoku lwesithuba ziikhawuntari ezimhlophe kunye neetayile ezimhlophe zangaphantsi.
Isebenzisa yonke indawo ekhoyo eludongeni, le khitshi yayicwangciswe ngokufanelekileyo ukuze ikwazi ukwenza ikhitshi eligcweleyo eligcweleyo kunye neendawo zokusebenza. Iikhabhathi zasekhitshini zingumthi oqinileyo ekugqityweni kwe-wengue emnyama kwaye zinezixhobo zokubala zegranite.
ILilac lukhetho olunomdla lokukhetha le khitshi yanamhlanje, inika ukuziva okupholileyo kunye nokukhanya. Ijongeka ilungile ngokuchasene nodonga lokukhanya okungwevu, ngelixa umphezulu omhlophe oqinileyo kunye nomgaqo omhlophe ongasemva obuyela umva kwiithayile zokutshiza uyinika amandla ahlaziyayo e-retro yangoku.
Le khitshi icwecwe ngobukhulu isebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezenziwe ngepeyinti, iyenza ibonakale icacile kwaye ilula, kodwa i-backsplash tile ekhethiweyo ihlawula indawo ecacileyo njengoko inendibaniselwano ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ongwevu nomhlophe, inika indawo ipateni enomdla kunye nokuthungwa.
Ukugxininisa kubuhle bemithi yeti, iikhabhathi zasekhitshini zigcina umbala wazo wendalo kunye neeoyile ngokulula ukongeza isiphelo esithambileyo. I-orenji ebomvu efihlakeleyo yeekhabhathi iyancoma umbala otyheli kwimephu yeplanga, ngelixa iindonga ezimhlophe ezimhlophe zinceda ukulinganisela kunye nokuthambisa ukugqitywa kweenkuni.
Enye yeenzuzo zokuba uyilo oluvulekileyo kukuba uya kuba nakho ukusebenzisa imibala emnyama ngaphandle kokwenza ukuba ibonakale inzima kakhulu. Iindonga ezingwevu zibonelela ngemvelaphi entle yokungathathi hlangothi kwiikhabhathi zokugqibela zeMahogany kunye nekhawuntara yecranite ephezulu.
Le khitshi iya kujonga ukubukeka okuphefumlelweyo kwelizwe. Isebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezigqityiweyo zekhitshi kolo luhlobo lwakudala oluhambelana nombala osetyenzisiweyo kwiithayile zangaphantsi. Izinto zokubala zenziwe ngeemabula, zinika inkangeleko entle yokuyilwa kwekhitshi ngokubanzi.
inkosazana umtshakazi ummangaliso max ucaphula
Ngenxa yendawo encinci, eli khitshi liya kwisikimu sombala okhanyayo. Isebenzisa zonke iikhabhathi ezimhlophe ezinomphezulu omnyama obekwe kwiindonga ezifudumeleyo ezingwevu kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi. Imephu yeplanga elula eyenziwe ngobunjineli yongeza umnwe wobushushu kwindawo, kwaye iyanceda ukuba ibonakale ikhaphukhaphu.
Isilingi yale ndawo sisebenzisa i-oki ekhanyayo eqinileyo, inika ilizwe elingaphakathi ilizwe ukuba livakale ngathi lidityaniswe ngeendonga ezingwevu ezikhanyayo. Njengoko isilingi sele sixakekile zizinto zomthi, iinkuni ezisetyenzisiweyo kwiikhabhathi zekhitshi zilingana nje nophahla lweenkuni, zenza ukubukeka okuhle.
Ukucoceka kunye nokwala maxesha ngokuqinisekileyo kufakela inkangeleko yale khitshi yanamhlanje izama ukufezekisa. Imigangatho ye-Mahogany kunye neendonga ezimhlophe zibonelela ngemvelaphi enkulu kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Umpunga oqinileyo ongwevu wawuyinto ephezulu yokuzikhethela, enika umahluko ocacileyo ngokuchasene neetayile ezimhlophe zendlela engaphantsi.
Ngaphandle kwesithuba esilinganiselweyo, le khitshi icwecwe likwazi ukulingana kwizinto eziyimfuneko ekhitshini, ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo kwifriji enkulu eneminyango emibini ngaphandle kwendawo encinci. Ukutshatisa nolwakhiwo lwangoku, iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa ukugqitywa komthi we-teak kwaye ziludibanise kunye ne-black granite counter top & backsplash ukuze ijongeke ngakumbi.
Ukuphakamisa indawo enqongopheleyo ekhoyo, iikhabhathi zekhitshi zisebenzisa ukuphakama okupheleleyo kweendonga kwaye zikusebenzisa ukugcina okongeziweyo. Iilaminates zomthi weTeak zazisetyenziselwa ukunika imvakalelo efudumeleyo kodwa zigcinwa kubuhle banamhlanje bendawo kunye nokubuyela umva kunye nokuthelekisa imiphezulu yeetafile iCarrara marble yayisetyenziselwa ukunika isibheno esilula kodwa esihle.
Icocekile, ithe tye kwaye iyasebenza kakhulu, eli khitshi liyayiqhekeza kwizinto eziyimfuneko, lisebenzisa kuphela iziqwenga ezifanelekileyo ukugqibezela oku kuyilwa. I-White yayiyikor yokhetho kuzo zombini iindonga kunye neekhabhathi zekhitshi, ngelixa i-backsplash isebenzisa i-granite ekhanyayo, yongeza umbala ocacileyo.
Nokuba kukho indawo encinci, eli khitshi liyakwazi ukulingana kuzo zonke izinto eziyimfuneko ekhitshini, ngokucwangcisa ngokufanelekileyo ikhitshi ukwenza ukuhamba komsebenzi okugqwesileyo. Ikwasebenzisa udonga olunye kugcino olupheleleyo lwepatry, ikunike igumbi elingaphezulu kweencopho zomsebenzi. Ukuya kukhangeleka okwangoku, iikhabhathi ezisisiseko zalaminishwa eMahogany emnyama ngelixa ngaphezulu kusetyenziswa umhlophe, ukuyenza iphantse idibane nodonga olumhlophe ukuba ayingombambo wentsimbi engenasici.
Ukucwangciswa kwekhitshi kunye neziqithi kunokusebenza ngokulungiselela ukutya kwaye wenze unxantathu osebenza ekhitshini onxantathu. Indawo encinci yekhitshi yanamhlanje enesiqithi inezinto zokubala ezimhlophe eziqinileyo zomhlaba kunye neekhabhathi ezimdaka ngombala. Iikhabhathi eziphezulu ezidadayo kunye naphantsi kweekhabhathi zesiqithi zibonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo yokupheka kunye neembiza kunye neepani.
Ibhalansi yobuhle beklasikhi kunye nokulula kwale mihla, eli khitshi linobhalansi oluchanekileyo lwezi zinto zangoku neze-classic. Iikhabhathi ezisetyenzisiweyo ziindlela zesiko kumnyama ogqityiweyo omile ngokuchasene neendonga ezimhlophe ezimhlophe. Ngaphezulu kwekhawuntari, kwasetyenziswa amatye amhlophe amdaka amhlophe esepha kwaye adityaniswa neetayile zendlela engaphantsi yeglasi yokubuyela umva kunye nokuthambeka okungaphantsi okuluhlaza.
Ukuya kwinkangeleko yelizwe lalemihla, eli khitshi lisebenzisa iprofayili yekhabhathi elula epeyintiweyo ngombala omhlophe osicaba. Oku kwakudityaniswe ngeemabhile ezimhlophe kunye nokuhombisa okubalaseleyo okungwevu kunye neethayile ezimhlophe zendlela engaphantsi. Olu luyilo lukhangeleka njengobuhle obungapheliyo obuya kujongeka bukhulu kuzo zombini iindawo zangoku nezesiko zesitayile.
Le khitshi emile njengo-U yakwazi ukuyiphepha ukuyenza ukuba ikhangeleke incinci kwaye inyibilike ngokuya kuyo yonke imibala emhlophe. Nokuba izixhobo ezisetyenzisiweyo bezimhlophe ukugcina imbonakalo encinci kunye nokuyibeka phezulu ngeCarlara marble yokongeza ipateni encinci ngaphandle kokuya kude kumbala wombala.
Ngokwesiqhelo iikhitshi zala maxesha, olu luyilo luya kuyo yonke imibala emhlophe ebonisa ukuba iluncedo ngenxa yendawo encinci kakhulu kunye nokungabikho kokukhanya kwendalo. Zonke iikhabhathi zazingamaminerali ngombala ocwebezelayo kwaye zifakwe umphezulu omhlophe ongenamthungo. Isebenzisa iithayile zombala we-ceramic kwi-backsplash ukongeza ukubamba okungacacanga kobume kunye nepateni, ngelixa izibane ezingezizo zisetyenziselwa ukubuyekeza ukungabikho kokukhanya kwendalo.
Le khitshi icwecwe yenza ingxelo enkulu nokuba inobungakanani bayo obuncinci. Iqukethe uyilo lwangoku olunezinto zokubala zelitye lekalika kunye nekhabhathi yepeyinti epeyintiweyo. Kukho ezinye iikhabhathi ezimhlophe ezibengezelayo ngokungafaniyo kancinci. Esingakulibaliyo sisiselo esikhulu / ifriji yewayini ecaleni kwefriji yentsimbi.
izimvo zesikhumbuzo sesikhumbuzo kuye
Iingcamango zeKhitshi elincinci - Uyilo lweKhitshi oluncinci lwangoku - Iingcamango zangoku zeKhitshi - Uyilo lweKhitshi eNtofontofo
leliphi icala elenza umsesane wesithembiso
zenzele izimemo zeshawari yomtshato
Ungamiselwa njani e-illinois
izipho zokutshata oomolokazana ngosuku lomtshato
Ikhekhe lomtshato imibono yetafile